Nuuhoo Goobanaa kunooti Barreessaan: Afandii Muttaqii - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNuuhoo Goobanaa kunooti Barreessaan: Afandii Muttaqii
Nuuhoo Goobanaa kunooti
Barreessaan: Afandii Muttaqii
Ar’a guyyaan ar’a guyyaan
Ar’a guyyaan kan Oromootii
Ar’a guyyaan kan seenaatii
Guyya walitti dhufanii
Eeyeen! Nuuhoo Goobanatu akkas jedhee sirbe. Nuuhoo isa ganamaa! Nuuhoo mootii namaa! Nuuhoo qabsaawaa ummataa! Nuuhoo buleessa namaa! Nuuhoo gamna biyyaa! Nuuhoo lafa buleessa! Nuhoo angafa keenya! Nuuhoo sabboonaa keenya!
Nuuhoo jechuun nama tokkoo miti. Nama dhibbaa mitii. Nuhoon mataa isatti waraana raayyaa (regiment) tokko caala. Gumaata inni qabsoo Oromoo fi aartii Oromoo keessatti gumaache himanii fixuuun nama dhiba.
Nuuhoon artistii dhugaati. Dandeettii artii dhugaan qaba. Nuuhoon walisaadha. Nuuhoon walaleessaadha. Nuuhoon edaleessadha. Nuuhoon gitaaristiidha. Nuuhoon qindeessaa muuziiqaati.
Beektootni muuziqaa sagalee Nuuhoo sagalee walissaa beekkamaa biyya Suudaan Sayyid Kaliifaa wajjiin madaalsisan. Nuuhoon sirba hoggaa sirbu nootaa gabaabaa irraa haga nootaa dheeraa bu’ee bahuu danda’a. “Major” gaafa ijoollee irratti walisaa ture san yeroo ammaa kanas itti sirbuu nidanda’a.
Nuuhoon artistii qofaa miti. Nuuhoon qabsaawa qixa hinqabne kan sirboota isaatiin hamilee qabsaa’ota Oromoo kakaasa tureedha. Nuuhoon kan sirboota isaatiin Oromiyaa bahaa fi lixa, kaabaa fii kibba wal-qunnamsiiseedha. Nuuhoon artistoota keenya kan aadaa fi Afaan Oromoo adunyaa irratti nuuf beeksisan keessaa isa guddaadha.
Isin waamti harmeen
Ar’a Guyyaan kan Oromooti
Yaa biyya too gaarii
Ililchi mee saba koo
Baatuu yaa midhaan Baatuu
Manni koo daggala
Gullallee lafa seenaa
Lalisee Rooba Galmoo
Oromoo wa Sudan
Oromotii Iyoo Somaal Walaal
Yaa Rabbi galatni kee hinbadu
Sirbootaa warraaqsaa fi qabsoo kanneenii fi kan biroo eenyutu irraanfata? Sirbootni jaalalaa kan inni sirbe hoo yoom dagataman? Sirbootni hawaasummaa hoo? Nuuhoo jechuun akkasi.
Kana malees bara 1991-2002 gaafa qabsaa’ootni Oromoo daggala keessaa qabsoo hidhannoo finiinsanii turan sana Nuuhoon biyya Kaanaadaa irraa gama daggala Oromiyaa dhufee hamilee qabsaawota Oromoo jajjabeesse akka ture ni yaadatama.
Yaa ummata keenya! Yaa Namoota keenya!
Dubiin Nuuhoo Goobanaa suni maalirra geesse? Sochiin isa yaalsisuuf jalqabamee ture sun osoo bakka hingehin yoo karaa irratti citee hafe salphina guddaadha.
Jagna ofii abbaatu kabaja. Yoo lammiin isaa kabaje alagaanis ulfina itti gooti. Akka Nuuhoon saba kanaaf qabsaween silaa ar’a “social media” gubbatti gargaarsa nama funaananiif hinturre. Kuni dadhabina guddaadha.
kan dabre irra tan hafteetu caala.
Waa’ee wal’aansa Nuuhoo kana itti hin cali’isinaa. Namootni sochii jalqabdan ummatatti bahaati waan irra geessan nuuf ibsaa. Deeggarsa ummata irraa barbaaddan adda nuuf baasa. Bifa buusiin itti walitti qabamu nuuf babal’isaa (fkn biyya keessatti Heerreega Baankii sadii fi afuritti nuuf banaa) .
Kanneen haftan ammo waan dandeessan gumaachaa.